Himalaya Dainik » आखिर के छ सन्नी लियोनको यो तस्विरमा ? लाखौँ समर्थक क्षणभरमा झुम्मिए !
मुम्बई, बलिउड अभिनेत्री सन्नी लियोनी पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा धेरै सक्रिय छिन् । उनी आफ्नो निजी जीवनसँग सम्बन्धित कुराहरु सामाजिक सञ्जालमार्फत फ्यानहरुका लागि साझा गर्दै आएकी छिन् ।
हालै उनको एक अवतारले सबैलाई हैरान बनाएको छ । उनी कोरोना महामारीपछि उनी केही समयको लागि अमेरिकामा थिइन् । झण्डै ६ महिना लामो अमेरिका बसाई सकेर उनी भर्खर मुम्बई फिर्ता भएकी छिन् । उनले यो खबर आफ्ना फ्यानहरूसँग साझा गर्दै इन्स्टाग्राममा एक तस्वीर पनि राखेकी छिन् । उडानको समयमा क्लिक गरिएको तस्वीर अहिले निकै भाइरल भइरहेको छ ।
उनी तस्वीरमा कालो टीशर्ट र कालो स्वेटशर्ट लगाएको देखिन्छ । सन्नी लियोनलाई अनुहारमा कालो मास्क र कोरोना सुरक्षा गियर (चश्मा) लगाएको देखिन्छ ।सन्नीको यो लुक एकदम राम्रो देखिएको छ । उनले चित्रको क्याप्शनमा उनले आफु ६ महिना पछि घर फर्किएको बताएकी छिन् । क्याप्शनमा उनले लेखिन्, ‘६ महिना पछि अब घर मुम्बई फर्कने समय आएको छ ।
नयाँ साहसिक कार्य’ उनको यो तस्वीरलाई झण्डै ८ लाखले लाइक गरेका छन् भने करिब ५ हजारले प्रतिक्रिया जनाएका छन् । सन्नी लियोन आफ्ना पति डेनियल वेबर र बच्चाहरूको साथ अमेरिकाको लागि प्रस्थान गरेकी थिइन् । भारतमा लकडाउन नखुल्दासम्म उनी अमेरिकामा नै बस्नु परेको थियो ।